Sunday January 26, 2020 - 21:35:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dhawaan uun bay ahayd kolkii caalamku ku war helay Virus cusub oo ka dillaacay waddanka shiinaha.
Fayruskan cusubi wuxuu ka dillaacay magaalo ku taalla badhtamaha waddanka shiinaha oo lagu magacaabo Wuhan, cudurkan oo si wayn u saameeyay waddanka shiinaha ayaa durbadiiba waxaa la joojiyay dabbaaldegyadii ay dawladda mushrikiinta ee jaynuhu ugu dabbaal degayaan sanadkooda tirsiga dayaxa ama lunar-ka.
Waxaa la karantiilay dadka ku dhaqan magaalooyin dhowr ah si aan fayrasku ugu dhax faafin Fayraskan oo dhakhaatiirta iyo khuburada caafimaadku ay sheegeen in lagu kala qaadayo neefsashada iyo taabashada meel Fayrusku gaadhay iyadoo aanay waxba kaa xigin.
Waxaa illaa hadda u dhimatay tobanaan ruux halka 1300 oo qofna la sheegay in cisbitaallada la dhigay oo ay dhibbanayaal u yihiin Fayraskan khatarta ah, Waxaa xusid mudan magaalooyinka bandowga la saaray ee la karantiilay in ay kunool yihiin illaa afartameeyo milyan oo qof.
Dadka tareennada raacaya ayaa sidoo kale waxa ay isticmaalayaan suufka lagu daboolo afka iyo sanka si aanay u qaadin Virus-kan, Magaalada Wuhan ee badhtamaha shiinaha ayaa markii ugu horreysay lagu arkay cudurkan dhammaadkii Decembar ee sannadkii tagay 2019. Wuhan ayaa sidoo kale dalbatay in degdeg looga hirgaliyo cisbitaal weyn taas oo wararka qaar ay sheegayaan in la hirgeliyay cusbitaal muddo lix cisho ah gudahood, dhakhtarkaas oo qaadi doona illaa kun beeshin. Magaallada Wuhan waa xarunta gobolka hubei ee shiinaha, gobolkaas oo ku caan ahaa cimilo qabow xigeen ah iyo mararka qaar dalxiiska.
Astaamaha corona-ha waxaa kamid ah: duuf sanka ka dareera, madax xanuun, qufac iyo sidoo kale qandho daran. xummadda saa’idka ah awgeed oo lagu garan ogyahay cudurkan ayaa waddamada qaar ay ku xidheen goobaha laga duulo qalab sheegaya heerkulka jidhka qofka si loo ogaado dadka ka imaanaya shiinaha in ay qabaan cudurkan iyo inkale. Waxa sidoo kale isasoo taraya wadamada lagu arkayo kiisas dhif ah oo coronavirus-ku saameeyay.
Wadamada lagu arkey waxa kamid ah Thailand, Japan, Koonfurta kuuriya iyo Mareykanka. Isku soo wada duuboo cudurkan ayaa la aamminsan yahay in ay u sabab ahayd cunitaanka xayawaan qaba fayraska coronaha. Lama yaqaan saamaynta halka uu ku dambayn doono cudurkan cusub ee aan loo hayn ka hortag iyo daaweyn toona.
W/D: Wadaadyare Xaashi